खामका लागि डेलिभरी र फर्काइएको ठेगानाहरू प्रविष्ट गराउनुहोस्. डाटाबेसबाट तपाईँंले ठेगाना फाँट घुसाउन सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि डाटाबेस ठेगानाबाट.
तपाईँंले घुसाउन चाहनु भएको डाटाबेस सँगको ठेगाना डेटा चयन गर्नुहोस्.
तपाईँंले घुसाउन चाहनु भएको ठेगाना डेटा सहितको डाटाबेस तालिका चयन गर्नुहोस्.
तपाईँंले घुसाउन चाहनु भएको ठेगाना डेटा सहितको डाटाबेस फाँट चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि बायाँ तीर बटन क्लिक गर्नुहोस्. कर्सर सहितको डेटा बाकसमा डेटा थप गरियो.
Title is: खाम